Android - iPhone သတင်းများ | အိုင်ဖုန်းသတင်း
Android ဆိုတာ Google ကတီထွင်ခဲ့တဲ့ mobile operating system ပဲ ၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းအမျိုးမျိုးတွင်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်ထင်ရှားသည်၊ အသုံးပြုသူအားအနိမ့်၊ အလတ်စားသို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်မော်ဒယ်များကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်၊ ၎င်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့စျေးကွက်ဝေစုရရှိစေသည်။ ၎င်း၏အသွင်အပြင်ကတည်းက Android ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည်အလွန်မြင့်မားခဲ့သည်operating system သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော fluidity ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးကြီးမားသောဂေဟစနစ်ရှိသော application များမှတဆင့်ရယူနိုင်သည် Google Play စတိုး, operating system တွင်ပုံမှန်အားဖြင့် install လုပ်သောစတိုး။
Roblox သည် developer များအားရိုင်းစိုင်းသောကော်မရှင်များနှင့်ပိတ်ပစ်သည်
တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ၏ခွဲတမ်းအားသင့်တော်မှုသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ များစွာပြောခဲ့သည်။
Google သည် Apple နှင့် Samsung ကဲ့သို့တူညီသောလမ်းကြောင်းအတိုင်း လိုက်၍ အားသွင်းခြင်းမပါဝင်ပါ
ကန ဦး အငြင်းပွားဖွယ်တံဆိပ်တပ်ထားသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုနောက်မှ လိုက်၍ ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီကြီးသည် Apple နှင့်တူညီသောလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားလိမ့်မည်။
Samsung Galaxy Watch4အသစ်သည် iOS နှင့်မကိုက်ညီပါ
လက်တွေ့တွင်စျေးကွက်တွင်စတင်ထုတ်လုပ်သောစမတ်နာရီအားလုံးသည် Android နှင့် iOS နှစ်ခုလုံးနှင့်လိုက်ဖက်သည်။
ထုတ်လုပ်သူ Realme သည်ပထမဆုံး Android ကို MagSafe နည်းပညာဖြင့်တင်ပြလိမ့်မည်
por Ignacio Sala လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း .
Apple သည် MagSafe နည်းပညာကို iPhone 12 ၏လက်ထဲတွင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကူးယူထားသောသံလိုက်အားသွင်းစနစ် ...
တစ်လကျော်ကျော်လောက်တွင် Android 12 ၏ပထမ betas များကိုမည်သည့်သုံးစွဲသူအတွက်မဆိုရရှိနိုင်ပါပြီ ...
Apple က iMessage ကို Android မှာထည့်တာကသူတို့အတွက်မကောင်းဘူးလို့ဆိုပါတယ်
por Jordi Gimenez လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်း .
အများအားဖြင့် Apple ကဲ့သို့ကြီးမားသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်အရာရာတိုင်းသည်ရိုးရှင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာထင်မြင်မိသည်။
အိုင်ဖုန်းဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေသလား။ Apple က Google Pixel 4a5နှင့် Samsung Note 20 ကိုလဲလှယ်ခဲ့သည်
por Karim Hmeidan လွန်ခဲ့တဲ့7လအတွင်း .
အာရှကုမ္ပဏီများတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးလောကသို့ရောက်ရှိခြင်းသည် LG ကုမ္ပဏီနှင့်သိပ်မတော်ပေ။
por Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် လွန်ခဲ့တဲ့9လအတွင်း .
သင်ဂူဂဲလ်တွင်ထည့်သွင်းထားသော ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးအပါအ ၀ င်၎င်း၏လက်ထောက်အပါအ ၀ င်စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ ...
Android Auto သည် CarPlay ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးကေဘယ်လ်မပါပဲအလုပ်လုပ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်နှင့်အခြားသောနိုင်ငံများတွင် Android အော်တိုဝန်ဆောင်မှုကိုချိတ်ဆက်စရာမလိုပဲရနိုင်သည်။